उद्योग द्वारा शरीर लगाएका क्यामेराको उपयोगिता | OMG समाधानहरू
उद्योग द्वारा शरीर लगाएका क्यामेराको उपयोगिता
शरीरमा लगाएका क्यामेरा कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न र कानून कार्यान्वयन अभ्यासलाई सामान्यतया सुधार गर्ने एक दृष्टिकोणको रूपमा देखिएका छन्। आविष्कार, जो एक अधिकारीको चश्मा वा छाती क्षेत्र माउन्ट गर्न सकिन्छ, लगातार डेटा प्रदान गर्दछ जब देखाइरहेका अधिकारीहरू वा बिभिन्न असाइनमेन्टहरूले नेटवर्कबाट व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा ल्याउने प्रयोग गर्दा। शरीर लगाइएको भिडियो (BWV), अन्यथा भनिन्छ शरीर क्यामेरा वा पहिरिन योग्य क्यामेरा एक पहनने योग्य ध्वनि, भिडियो, वा फोटोग्राफिक रेकर्डिंग फ्रेमवर्क हो।
जहाँसम्म परम्परागत रूपमा कानून प्रवर्तन र स by्कट प्रशासनहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ, शरीर-लगाउने क्यामेराको एक ठूलो संख्याको प्रयोग छ र यो भित्र लाभदायक साबित हुन सक्छ उद्योगहरूको विस्तृत श्रृंखलाउदाहरण को लागी:
इलेक्ट्रिक, ग्यास र सेनेटरी सेवा
तपाईंले सोच्नु भएको हुन सक्छ कि शरीरमा लगाएको क्यामेराको दायरा पुलिस र सुरक्षा गार्डको प्रयोगमा सीमित छ तर यो पूर्ण रूपमा सत्य छैन। यो लेखले कसरी विस्तृत विश्लेषण गर्दछ र नोट दिन्छ, र कुन उद्योगहरूले तिनीहरूको फाइदाको लागि शरीरमा लगाउने क्यामेराहरू प्रयोग गर्दछन्। यस टेकको प्रयोग गरेर उनीहरूका फाइदा र विपक्षहरू के हुन्? के यी टेकलाई यी उद्योगहरूबाट अधिकतम नाफाको रीढको रूपमा मान्न सकिन्छ?
शरीरले लगाएको क्यामेरा - टेकको एक उठेको टुक्रा:
केवल शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूले कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दैन तर यसका यसको अन्य प्रयोगहरू पनि छन् जुन हामी बेवास्ता गरिएको हुन सक्छ। शरीरमा लगाउने क्यामेरा प्रविधिको एक बढ्दो अंशको रूपमा मानिन्छ जुन ढिलो होस् वा चाँडो लगभग सबै उद्योगको एक अनिवार्य अंश हुन गइरहेको छ। हामीले प्रत्येक नयाँ उद्योगमा शरीरले लगाउने क्यामहरूको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ यस नयाँ टेकलाई पूर्ण रुपले अँगाल्नको लागि। नयाँ टेक्नोलोजी अँगाल्ने सधैं गाह्रो हुन्छ। जून 2017 मा आयोजित टोम टेल टेलिमेटिक्सको वरिष्ठ प्रबन्धक अध्ययनका अनुसार बेलायतका प्रायः एक तिहाई व्यापारी नेताहरूले नयाँ टेक्नोलोजीहरू अपनाउने कुरामा उनीहरूको संगठनहरू पिछडिएको कुरा स्वीकार्छन्। टेलीग्राफ.
सफल जीवन बिताउनको लागि, नयाँ सुझावहरू र विचारहरूको लागि खुला मनले सधैं भर्या .मा चढिरहेको हुन्छ। व्यापार र उद्योगहरूको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो, यो कुरा स्पष्ट छ कि नयाँ टेक्नोलोजी अँगाल्ने व्यवसायहरू विगतमा राम्ररी फस्टाए। तसर्थ, मेरो दृष्टिकोणमा, प्रत्येक उद्योग र हरेक व्यापारीहरूले आ-आफ्नो पेशामा नयाँ टेक अँगाल्ने विचार गर्नुपर्छ। शरीरमा लगाएको क्यामेरा एक बढ्दो टेक्नोलोजी हो र ती आधुनिक र क्लासिक उद्योगहरूमा सहयोगी हुन सक्छन्।
शरीरले लगाएको क्यामेरा र कृषि:
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन मानव अन्तर्क्रियामा सम्मिलित छ। कृषि पनि ती मध्ये एक हो। कृषि एक अर्थव्यवस्था को जीवन मा एक अनिवार्य रोजगार ग्रहण गर्दछ। यो हाम्रो वित्तीय रूपरेखाको आधार हो। कृषि व्यवसायले पोषण र कच्चा मालका साथै जनसंख्याको असाधारण अत्यधिक हदसम्म ब्यापार अवसरहरू दिन्छ।
अब प्रश्न यो छ कि शरीरमा लगाउने क्यामेराले कसरी हाम्रा किसानहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ? यो देखिएको छ कि किसानहरू ठूलो संख्या फार्म काम गर्दा बिरामी वा घाइते। यी चोटपटक एलर्जी वा कोरबाट संक्रमणको परिणाम हुन सक्छ वा यो कुनै जंगली जनावरको आक्रमणको कारण हुन सक्छ।
एक अनुसार रिपोर्ट रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC), 2014 मा, अनुमानित 12,000 युवाहरू फार्ममा घाइते भए; यी दुर्घटनाहरूको 4,000 खेतको कामका कारण थिए। अब, यी चोटपटक वा युवा किसानहरूको मृत्यु पनि रोक्न सकिन्थ्यो यदि ती दिनमा उचित प्रविधी प्रयोग गरिएको थियो। किसानहरूको छातीमा शरीरले लगाएको क्यामेराले तिनीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्दछ, कि घरमा आफ्ना प्रियजनहरूले तिनीहरूलाई हेरिरहेका छन्। यदि कुनै अनिश्चित वा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्छ भने, तिनीहरू समयमै तिनीहरूलाई बचाउन आउँदछन्। यसले पक्कै पनि कारणहरूलाई कम गर्नेछ।
केही बालीहरू रातमा पानी हाल्नु पर्ने हुन्छ, किसानहरू खेतमा राति एक्लै जान सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, किनकि जंगली जनावर आउने खतरा उनको टाउकोमा सँधै ठूलो हुँदै जान्छ। तर यदि तिनीहरूलाई थाँहा छ भने, तिनीहरू निगरानी भइरहेको छ र कुनै पनि दुर्घटना तुरून्त रिपोर्ट हुनेछ, तिनीहरू राती एक्लै जान हिचकिचाउँदैनन्।
शरीरमा लगाएको क्यामेराले किसानहरूको रोजगारदाताहरूलाई कसरी काम गरिरहेको छ त्यसमा ध्यान दिन र उनीहरूको प्रगति, साथै बालीनाली प्रदर्शन र बृद्धिलाई ट्रैक राख्न मद्दत गर्दछ।
शरीरले लगाएको क्यामेरा र खनन:
धातु र खनिजहरू हामी हाम्रो दैनिक दैनिक अस्तित्वमा निर्भर गर्दछौं। बन्दको अवसरमा कि तपाइँ वास्तवमै यसलाई विचार गर्न एक मिनेटको लागि रोक्नुहोस्, वरिपरि हेराइहरू हेर्नुहोस् जुन तपाइँलाई समाहित गरिएको छ बिरूवामा आधारित सम्पत्ति द्वारा बनाइएको छैन। सिमेन्टबाट तपाईले अहिले स्क्रिनमा घुम्नु भएको स्क्रिनमा, हाम्रो वास्तविकता र हाम्रो जीवनशैली वर्तमान खनन अभ्यासहरूको नतीजामा निर्भर गर्दछ।
खनन मार्न र ग्रहमा अन्य कुनै पनि कामको तुलनामा व्यक्तिहरूको ठूलो संख्यामा हानि पुर्‍याउँछ। १ 15,000,००० भन्दा बढी खनिजहरू प्रत्येक वर्ष मारिन्छन् - र यो मृत्युको आधिकारिक संख्या मात्र हो। सबै सम्भावनाहरूमा, यो त्यो भन्दा बढि हो। यस प्रकारका घटनाहरूबाट बच्नका लागि धेरै तरिकाहरू छन्। शरीरमा लगाएको क्यामेराको उपयोग ती मध्ये एक हो, यसले निकट भविष्यमा कुनै विपत्तिजनक घटना हुन गइरहेको छ कि भनेर जान्न भूमि माथि व्यक्तिहरूको निरीक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
यी विशेष शरीर क्यामहरू जुन पृथ्वी मुनिका चरम अन्धकार ठाउँमा उच्च परिभाषा प्रवाह दिन सक्छ त्यस्ता प्रकारका घटनाहरूबाट जोगिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यदि कुनै हाफिजार्डको पूर्वानुमान गरिएको छ भने, खानीमा काम गर्नेहरूले मोनिटरहरूको पछाडि बच्चाहरूलाई उद्धार टोलीमा पठाउन जानकारी दिन सक्दछन्। यो पनि देखिन्छ कि खानीहरु पनि दम घुटनको कारण मर्दछन्, यी विशेष शरीर क्यामहरु पनि धुवाँ डिटेक्टरहरु संग आउँछन् जसले उद्धार टोलीलाई सचेत गराउँदछ, यसैले खानीकर्ताहरुलाई समयमै बचाउनेछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हामी भन्न सक्दछौं कि शरीरमा लगाउने क्यामहरू खानीहरूको सुरक्षा सावधानीको एक आवश्यक हिस्सा हो र तिनीहरू उनीहरूको खानी उपकरणको एक हिस्सा हुनुपर्छ। यी सावधानीहरूलाई लिनु भनेको विगत केही दशकहरूमा देखिएको धेरैको तुलनामा निश्चय नै मर्नेहरूको संख्या कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
शरीरले लगाउने क्यामेरा र निर्माण:
हामीले आज सामना गर्ने मुख्य मुद्दा भनेको उनीहरूको निर्माणकर्ताको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छैनन्। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू कामको सट्टा अधिक समय बर्बाद गर्दछन्। बिल्डरको छातीमा शरीरमा लगाउने क्यामेरा कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई उनीहरूको निर्माणकर्तामा नजर राख्न सक्छन्। निर्माण साइटहरू जनसंख्या भएको शहरका प्रत्येक दुई खण्डहरूमा देख्न सकिन्छ जुन यस उत्पादनको लागि विशाल अवसरहरूको संकेत गर्दछ। एक ठेकेदार वा मालिकले यस बिल्डरको प्रयोग गरेर उनीहरूको बिल्डरको क्रियाकलाप र प्रदर्शन ट्र्याक गर्न सक्दछन्।
यी उपकरणहरूलाई कर्मचारीहरूमा माउन्ट गर्नाले तिनीहरूलाई काममा व्यस्त राख्दछ किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको ठेकेदारले लगातार उनीहरूको अनुगमन गरिरहेको छ। तिनीहरूले आफ्नो काममा सक्दो राम्रो दिन्छन्, किनकि यो आधारभूत मानव स्वभाव हो कि हामी जान्न जान्दछौं कि कोहीले हामीलाई हेरिरहेको छ र जब कोही तपाईंको रोजगारदाता हुन्, र तपाईं आफ्नो जागिर गुमाउने जोखिममा हुनुहुन्छ; 100% परिणाम अवलोकन गरिनेछ।
निर्माण उद्योगमा शरीरले लगाउने क्यामेराले उत्पादन गर्न सक्ने अर्को ठूलो फाइदा यो हो कि यदि कुनै कर्मचारी बिल्डिंग प्रक्रियाको क्रममा घाइते भयो भने, उचित प्राथमिक उपचार र औषधि उसलाई प्रदान गर्न सकिन्छ किनकि अर्को छेउमा भएको व्यक्तिले दुर्भाग्यको बारेमा तुरुन्त सूचित गर्यो। घटना यसैले हामी भन्न सक्दछौं कि शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूले तपाईलाई सुरक्षा उपाय मात्र नभई प्रशासकीय आदेशहरू पनि प्रदान गर्दछ। त्यसकारण, यो स्पष्ट छ कि शरीरमा लगाएको क्यामेरा नयाँ निर्माण व्यवसायको साथै पुरानोको पनि एक हिस्सा हुनुपर्छ।
शरीरले लगाएको क्यामेरा र निर्माण:
निर्माण व्यवसाय पक्कै पनि ज्ञात छैन। यद्यपि यो उद्योग दुबै बढ्दो अर्थव्यवस्था र सिर्जना गरिएको बजारको प्रगतिको लागि महत्त्वपूर्ण महत्त्वको छ। जबकि निर्माण सबै मुद्दाहरूको उत्तर होइन, यो एक काल्पनिक र नवीन उद्योग हो जसले कामका लागि धेरै ढोका सिर्जना गर्दछ। यी कामका लागि खोलेका मानिसहरू भरिएका हुन्छन र राम्रो कार्यस्थलको वातावरण सिर्जना गर्न यी व्यक्तिहरूलाई अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ।
मानौं तपाईं कपडा उत्पादनको एकाई लगाउनुहुन्छ। तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि कामदारहरूले आफ्नो कामहरू ठीकसँग गरिरहेका छन्, त्यसको लागि तपाईंले उनीहरूको छातीमा शरीरमा लगाएको क्यामेरा रोप्नु पर्छ। यो तपाइँ तपाइँको उत्पादन र लाभ अनुकूलन मा मद्दत गर्दछ।
निर्माण इकाईमा शरीरमा लगाउने क्यामेराको अर्को फाइदा यो हो कि यसले कर्मचारीहरूको बिच राम्रो र स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू अनुगमित भैरहेछन्, त्यसैले तिनीहरू एक अर्कालाई साना चीजहरूमा लड्दैनन् जुन उत्पादन इकाईहरूमा मानिसहरूमा साझा कुरा हो (किनकि तिनीहरूको व्यस्त जीवनको कारण)। यो मनाइएको छ कि ती उत्पादन इकाइहरूमा कम झगडा हुन्छ जहाँ शरीर क्यामहरू स्थापना गरिएको हुन्छन् जहाँ उनीहरू स्थापना गरिएका छैनन्। त्यसकारण हामी भन्न सक्दछौं कि शरीरमा लगाउने क्यामेरा निर्माण उद्योगको अत्यावश्यक अंश भइरहेका छन्। त्यो युग अब धेरै टाढा छैन जब प्रत्येक एकाइका हरेक श्रमिकहरू शरीर क्यामहरूसहित सुसज्जित हुनेछन्।
शरीरले लगाएको क्यामेरा र यातायात:
शरीरमा लगाउने क्यामेरा वा अन्य कुनै क्यामहरू सुरक्षाको लागि सधैं महत्वपूर्ण खेलाडी भएको छ जब यो यातायातको क्षेत्र आउँछ। तिनीहरूले तपाईंलाई सडकमा हुने प्रत्यक्ष घटनाहरू स्ट्रिम गर्न मद्दत गर्छन्। यदि तपाईं यातायात कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले यस प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तपाइँको कर्मचारीको छातीमा शरीरले लगाउने क्यामेराहरू जान्दछन् कि उनीहरु कसरी ड्राइभि। गर्दै छन् र सडकमा उनीहरुको दृष्टिकोण के हो। तिनीहरूले तपाईंको बहुमूल्य ग्राहकहरू कसरी यात्रुलाई व्यवहार गरिरहेका छन्?
यदि तपाईंले यातायातको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुभयो भने शरीरमा लगाउने क्यामहरूले के फाइदा लिन सक्छ? ठिक छ, सबै भन्दा पहिले, तपाईं चालक ट्र्याक गरिरहनु भएको मार्ग ट्रयाक राख्नुहुनेछ, जुन GPS को साथ पनि सम्भव छ, कुनै श doubt्का छैन, तर यस तरिकाले तपाई लाइभ फिड पाउनुहुन्छ। दोस्रो लाभ जुन म यी क्यामहरू प्रयोग गरेर देख्न सक्छु त्यो हो; यदि कुनै दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्दछ भने, तपाईं तिनीहरूको जीवन बचाउन समयमा उद्धार टोलीहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यसले फुटेज पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाईं पछि विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ पहुँच गर्न के गलत भयो जुन डरलाग्दो घटनाको कारण भयो।
ड्राइभरको वा कन्डक्टरको छातीमा जडिएको क्यामेराले दुबै पक्ष, यात्रु र ड्राइभर दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। एक यात्रुलाई थाहा छ कि अर्को छेउमा कसैले फिड हेरिरहेको छ र उसलाई निगरानी गरिएको छ, जसले कन्डक्टर वा बस चालकप्रति उसको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउँदछ। दोस्रो, यात्रुहरूले सुरक्षित महसुस गरीरहेका छन् कि ती ड्राइवरहरूले दुर्व्यवहार गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरूका रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई अवलोकन गरिरहेका छन्। यो अन्ततः यात्रु र अन्य यातायात कर्मचारीहरु बीच एक राम्रो उत्पादक सम्बन्ध मा परिणाम दिनेछ।
शरीरमा लगाएको क्यामेरा र संचार:
शरीरमा लगाएको क्यामेरा केही दिईएको क्षेत्रहरूमा सीमित छैन, तिनीहरू पनि सञ्चार सेवा व्यवसाय चलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण कुञ्जी हुन्। यदि तपाईं यस्तो प्रकारको व्यवसाय चलाइरहनुभएको छ भने, त्यहाँ ग्राहक समर्थन एजेन्टहरू हुनेछन् र मानिसहरू तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्न दैनिक आउँनेछन्। तपाईले खटाउनुभएको समर्थन एजेन्टको छातीमा शरीरले लगाउने क्यामेरा राख्नु उत्तम हुन्छ। यस एजेन्टको सुनिश्चित गुणवत्ता सेवालाई यस अवस्थामा हेरचाह गर्न सकिन्छ। मेरो रोजगारदाताले मेरो कुराकानी र ग्राहकहरूसँग मेरो व्यवहारको अनुगमन गरिरहेको छ भनेर जानेर, उसले पक्कै पनि आफ्नो एक्सएनयूएमएक्स प्रतिशत दिन्छ। यसले निश्चित रूपमा तपाईको ब्रान्डको बजारमा छाप लगाउनेछ र फर्काउँदा धेरै लाभदायक बनाउँछ।
शरीरमा लगाउने क्यामेरा र सेवाहरू:
कुनै पनि सेवा प्रदायक व्यवसाय मा काम, ग्राहक समर्थन र केयर त्यो व्यवसायको सब भन्दा आधारभूत चरण हो। ग्राहकहरू र तपाईंको तोकिएको समर्थन एजेन्ट बीच विश्वास स्थापना गर्नु तपाईंको कर्तव्य हो (यदि तपाईं सेवा प्रदायक व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ भने)। त्यहाँ धेरै तरीकाले सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि तपाईका ग्राहकहरूले वास्तवमै उनीहरूलाई चाहिने ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया जस्तै उनीहरूले चाहिने चीजहरू पाइरहेका छन्, तर के यो राम्रो हुने छैन कि तपाइँले यसलाई आफ्नै आँखाले देख्नु भयो कि सबै ग्राहकहरूले उचित समर्थन र हेरचाह पाइरहेका छन्। त्यो खोजी गर्न, शरीरमा लगाउने क्यामेरा आवश्यकहरू हुन्।
त्यहाँ यदि तपाई एक विद्युत सेवा प्रदायक हो भने शरीरमा लगाउने क्यामहरू प्रयोग गर्ने दुई फाइदाहरू छन्। एक, पहिले चर्चा गरेझैं यसले तपाईंको ग्राहक समर्थनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ। A सर्वेक्षण 2012 मा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसको नतीजाले 33% अमेरिकीहरू भन्छन कि उनीहरूले खराब सेवाको एकल घटना पछि मात्र कम्पनी स्विच गर्ने विचार गर्नेछन्। अर्को प्रकाशन अमेरिकी कम्पनीहरूले कमजोर ग्राहक सेवाको कारण वार्षिक $ 62 अरब भन्दा बढी गुमाउने भने। दोस्रो कुरा लाईनको मानिस जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो (ती देशहरूमा जहाँ खुला वायर्ड नेटवर्क स्थापना भएको छ)।
बिजुली प्रदायक जस्तै, ग्यास दिने व्यवसायले पनि राम्रो गर्न शरीरमा लगाउने क्यामहरू प्रयोग गर्न सक्दछ।
ढल निकाल्ने सुविधाको सहज प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न तल भूमिमा गइरहेका व्यक्तिहरू प्राय जसो गम्भीर अवस्थामा पर्दछन्। त्यस्ता अवस्थाहरूमा मृत्युको मुख्य कारण सतावट हो। यदि यी कर्मचारीहरू बडि क्यामहरूसहित सुसज्जित छन् भने त्यस्ता दुर्व्यवहार रोक्न सकिन्छ। अर्को स्थितिको अवस्थाको अनुगमन गर्ने व्यक्तिले उद्धार टोलीमा समय बचाउन धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ।
सफाई कर्माचारी आंदोलन (SKA) द्वारा गरिएको एक सर्वेक्षण, विगतको अमानवीय अवशेष हुनुको अलावा विगत केहि बर्षमा 1327 जीवनमा लाग्यो। सर्वेक्षणको तथ्या .्कका अनुसार, तमिलनाडुले विगत दुई दशकहरूमा लगभग 250 म्यानुअल बिरामी हुने मृत्युको रेकर्ड गरेको छ जसमध्ये एक तिहाईको करीब वा एक्सएनयूएमएक्सको मृत्यु चेन्नईमा र वरपर थियो।
शरीरमा लगाउने क्यामेरा र थोक व्यापार:
थोक एक प्रकारको विनिमय हो जसमा व्यापार सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ र धेरै मात्रामा राखिन्छ र बेचेको हुन्छ, तोकिएको रकमको गुच्छामा, सम्बद्ध कम्पनीहरू, दक्ष ग्राहकहरू वा जमघटहरू, तथापि निर्णायक ग्राहकहरूलाई होइन। स्वस्थ कार्य वातावरण र व्यापारीहरूको बीचमा विश्वासको भावना राख्न यस प्रकारका लेनदेनहरूको अनुगमन गरिनु पर्छ।
तसर्थ, यस उद्योगमा शरीर-लगाएको क्यामेराको प्रयोगले नयाँ भविष्यको लागि पनि आधार प्रदान गर्दछ जहाँ सबै लेनदेन र बैठकहरू रेकर्ड गरिएको छ।
शरीरमा लगाउने क्यामेरा र खुद्रा व्यापार:
खुद्रा व्यापार व्यवसाय भनेको उत्पादका दैनिक प्रयोगकर्ताहरू हुने निर्णायक ग्राहकहरूलाई सामान बेच्नको अर्थ हो। यस उद्योगमा शारीरिक-पहिरन क्यामेराको पनि आवश्यकता छ गुणवत्ता र सेवाको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि।
मानौं तपाईं एक किराना स्टोर चलाउनुहुन्छ, तपाईंलाई यो जान्नु आवश्यक हुन्छ कि तपाइँका कर्मचारीहरू पूर्ण भक्तिसाथ काम गरिरहेका छन् र ग्राहकहरू प्रति उनीहरूको व्यवहार पेशेवर छ। हामी भन्न सक्छौं कि यो अत्याधुनिक प्रविधि तपाईंको व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ।
शरीरमा लगाउने क्यामेरा र वित्त, बीमा र रियल इस्टेट:
शरीरले लगाएको क्यामेराले वित्त, बीमा र घर जग्गा कारोबार जस्ता व्यवसायहरूमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। यी सबै व्यवसायहरूलाई सबै लिखित र मौखिक सम्झौताको रेकर्ड आवश्यक पर्दछ। यी क्यामहरूले त्यस्ता रेकर्डहरू ट्र्याक राख्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।
यदि तपाईं एक बीमा कम्पनी एजेन्ट हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ क्यामेरा माउन्ट गरिएको हुनुपर्दछ जुन तपाईंको व्यवसायलाई धार दिन्छ। ग्राहकहरूले थाहा पाउनेछन् कि यस कम्पनीले सबै कुरा ट्र्याक गर्छ जुन ग्राहकको दिमागमा कम्पनीको सकारात्मक र प्रामाणिक छवि बनाउनमा परिणामित हुनेछ।
एउटा घर जग्गा व्यवसाय चलिरहेको छ, शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूले तपाईंको कारोबार ट्र्याक राख्दछ जुन तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछ यदि यदि ट्रेडको कुनै पनि पक्ष सम्झौताबाट पछाडि फर्कने प्रयास गर्दछ भने।
शरीरमा लगाएको क्यामेरा र कानून प्रवर्तन:
यो देखिएको छ कि मूल निवासीहरू मुठभेडको समयमा आधिकारिक निर्देशहरूको क्रमिक रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। बासिन्दाहरूले उनीहरूको आचरण परिवर्तन गर्दछन् जब उनीहरूले उनीहरू रेकर्ड गरिरहेछन् भन्ने महसुस गर्छन्। यसले कानूनको आवश्यकतालाई मद्दत गर्दछ जसले गर्दा निम्न-स्तरका अनुभवहरू प्रभावकारी रूपमा समाधानको सट्टा एक विचारशीलमा पुग्नु पर्छ जहाँ शक्तिको उपयोगको महत्त्वपूर्ण उपयोग हुन्छ।
शरीरले लगाएको क्यामेराले राम्रो सीधा र जिम्मेवारी ल्याउन सक्छ र यस तरीकाले कानूनको कार्यान्वयनमा सुधार र मद्दत गर्दछ। यो देखिएको छ कि असंख्य नेटवर्कहरूमा स्थानीय मानिस र कानून प्राधिकरण संगठनहरू बीच विश्वासको कमी छ। खतरनाक वा कम घातक शक्ति को उपयोग गर्न को लागी प्रश्नहरु छन् जब विश्वास को यो अभाव परेशान छ। यी आधिकारिक नेटवर्क संघहरूको दौरान पकडिएका भिडियो चलचित्रले अधिकारीहरू र नेटवर्कका बासिन्दाहरू द्वारा वर्णन गरिएको अवसरहरू र बोल्स्टर रेकर्डहरूको विचार पुष्टि गर्न मद्दतको लागि अझ राम्रो कागजात प्रदान गर्न सक्दछन्।
माथिका सबै सुविधाहरूले पोलिसिंग र कानून प्रवर्तन अनुप्रयोगहरूको लागि शरीरमा लगाउने क्यामेराहरू प्रयोग गर्ने धेरै सकारात्मक प्रभावहरू हाइलाइट गर्ने भएकोले क्यामेरा आफैंलाई 'जादुई गोली' मानिनु हुँदैन। शरीरमा लगाउने क्यामेरा थुप्रै उपकरणहरू मध्ये एक हो जुन प्रभावकारिता र सुरक्षा सुधार गर्नका लागि आधुनिक पुलिस फ्रेमवर्कको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
माथि छलफल गरिएको प्रत्येक पक्षलाई निष्कर्षमा हामी भन्न सक्दछौं कि शरीरमा लगाउने क्यामेरा आधुनिक समयका व्यवसायहरूको लागि आवश्यक तत्व हो। विभिन्न उद्योगहरूमा शरीरमा लगाउने क्यामेराको प्रयोग आफ्नो देशको विकास र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। आजकल, शरीरमा लगाएका क्यामेराको मुख्य प्रयोग पुलिस र सैन्य विभागहरूमा देखिन्छ तर यस लेखले सबै अवधारणाहरूलाई हटायो कि यो हरेक व्यवसायमा प्रमुख भूमिका हो।
प्रत्येक उद्योगमा यसको प्रयोगलाई जोड दिदै गोपनीयताको पक्षलाई रेकर्ड राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो स्पष्ट छ कि नयाँ टेक्नोलोजीहरू र सामाजिक नेटवर्कहरूको उद्भवले उनीहरूको गोपनीयता विचार गर्ने तरिकामा परिवर्तन आएको छ, तर शरीरमा लगाउने क्यामेराले बनाएको रेकर्डिंगले अनुहार पहिचान टेक्नोलोजीको सम्भावित प्रयोगको लागि अनुमति दिन सक्छ।
शरीरमा लगाएको क्यामेराको प्रयोगले अफिसरहरूलाई संवेदनशील स्थितिहरू रेकर्ड गर्ने अवसर दिन्छ, तर निजी घरहरू भित्र रेकर्ड गर्न जब गिरफ्तार वा अनुसन्धान गर्दछ। त्यस सम्बन्धमा, केही कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले यस्तो अधिकार लिएका छन् कि अफिसरहरू निजी घर भित्र रेकर्ड गर्ने अधिकार छ जबसम्म उनीहरू त्यहाँ रहन कानुनी अधिकार हुन्छ। यसले परिणाम स्वरूप धेरै व्यक्तिको गोपनीयता बिथोल्छ जुन पुलिसको लागि राम्रो छैन। कसैको गोपनीयतामा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन।
उद्योग द्वारा शरीर लगाएका क्यामेराको उपयोगिता पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: डिसेम्बर 5th, 2019 by व्यवस्थापक
4327 कुल दृश्यहरू 1 हेराइ आज